Amandla ngokuyikho nokunokwethenjelwa kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi Defense ohambweni zehlela njengoba ngempumelelo ngangokunokwenzeka; icwecwe, transportable, ongaphakeme-yesondlo generator amasethi ukuthi angakunikeza amandla okuqhubekayo noma eziphuthumayo ziyadingeka.
AGG Amandla inikeza amandla izixazululo nezidingo zobuchwepheshe zemizimba ngamazwe; generator amasethi ukuthi nikeza kwamandla nensimu izibhedlela tangcondvomshini ku Emakamu empi futhi umyalo nezokuxhumana izimoto.
Esinye sezici ezibaluleke kakhulu izicelo ezempi is ukukwazi ukunikeza ezimbili-imvamisa generator ongasebenza zombili 50 no-60 Hz. AGG Amandla futhi uyaqinisekisa ukuthi ukuvumelanisa izixazululo yamaphrojekthi ezidinga generator eziningana usetha ixhunywe ngokulinganisa.